के साँच्चै सलह खान हुन्छ त ? - जनमुखी खबर के साँच्चै सलह खान हुन्छ त ? - जनमुखी खबर के साँच्चै सलह खान हुन्छ त ? - जनमुखी खबर
उनका अनुसार नेपालमा आएको सलह तेस्रो जेनेरेसनको हो । अफ्रिकाबाट उडेको सलहको तेस्रो पुस्ता भएकाले भाइरसजन्य सङ्क्रमणको सम्भावना न्यून रहेको उनको भनाइ छ । अर्का कीट विज्ञ सञ्जय विष्टले मानिसले खान हुने÷नहुने सुुझाव नदिने तर कुखुरा र हाँसका लागि दानाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए । किसान र उद्यमीलाई त्यही सुझाएको जानकारी दिए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा चाँदनी हमालले लेखेकी छिन् ।
विद्यालय सञ्चालनबारे स्थानीय निकायले निर्णय गर्ने
देश विकासमा युवाको भुमिका महत्वपुर्ण: महर